Naya Bikalpa | राजनीतिमा बदलाको भावना लिएर संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर हलो अड्काएर गोरु चुट्न पाइदैन | Naya Bikalpa राजनीतिमा बदलाको भावना लिएर संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर हलो अड्काएर गोरु चुट्न पाइदैन | Naya Bikalpa
राजनीतिमा बदलाको भावना लिएर संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर हलो अड्काएर गोरु चुट्न पाइदैन
प्रकाशित मिती: २०७८ आश्विन १९, १५: २५: २६
नेपाली राजनीतिका प्रखर वक्ता एवम् कमयुनिष्ट नेता चित्र बहादुर केसी नेपालको संघीयता विरोधीका रुपमा परिचित छन् । नेपालजस्तो भौगोलिक तथा आर्थिक रुपले सम्पन्न नभएको मुलुकमा संघीयता धान्न नसकिने बताउँछन् ।
सँधै प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहने केसी अन्य नेताजस्ता तडकभडक नदेखाउने सादा जीवन उच्च विचारका धनीका रुपमा चिनिन्छन् । नेपालको राजनीतिलाई सँधै निकै नजिकबाट नियाली रहने केसी वर्तमान सरकारले पूर्णता नपाउँदा बेखुसी छन् । देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने तर्क राख्ने केसीसँग हाम्रा विशेष संवाददाताले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
तपाईहरुले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका त खेल्नुभयो तर अझैसम्म मन्त्री परिषद् विस्तार हुन सकेको छैन नि किन ?
हामी जब सरकारमै छैनौ, प्रतिपक्षमा छौं भनेपछि त त्यो पार्टीको खिचातानीले हो विस्तार हुन नसकेको । मैले त सुरुकै पहिलो बैठकमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी मात्रै भएर पनि तिमीहरुले एक दर्जन मन्त्री बनाउन सक्छौं, तिमीहरुले चाही सरकार गठन गर भनेर मैले सुरुमै भनेको हो ।
अरुतिर खचिङ्गल भएपनि नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपामा समस्या भएपनि कमसेकम दुईवटा दलले एक दर्जन मन्त्री बनाउन त सकिन्छ भनेर भनेको हो । कति मान्छे मन्त्री हुन लालायित छन् । पहिला त झनै दुई तिहाइकै सरकार थियो नि त्यो सरकारले प्रतिगमनको बाटो समातेपछि न मुलुकले यस्तो व्यहोर्नु प¥यो ।
पार्टी भित्रका सत्ता र शक्तिको लागि मरिहत्ते गर्ने जुन नेपाली प्रवृति हो, त्यो प्रवृत्तिको सिकार अहिले यो मुलुकमा भइराखेको छ, नेपाली जनता भइरहेका छन्, यसको छिटै समाधान हुनुपर्छ र अब चाही सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।
तपाईले सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गर्छु मिलेर जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्ने, छिटै मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने अनि सरकारमा सामेल हुने नीति भएकाहरुले मन्त्रीहरुको नाम दिने र मद्दत गर्ने होनि तर यो भइरहेको छैन । यहाँ बेठिक भइरहेको छ । नेपाली प्रवृत्ति यसपाली पनि देखियो । धेरै मान्छेलाई मन्त्री हुन पनि ।
मालदार मन्त्रालय चाहिने, राष्ट्र र जनताको सेवाभन्दा आफ्नो स्वार्थ गुटगत स्वार्थ, आफ्नो व्यक्तिगत महत्वकाँक्षा यो धेरै चिजले कामले काम ग¥यो, यो नेपाली जनतालाई मान्य हुन्न त्यही पनि यो बाध्यताको उपज हो । अब छिटै सरकारको निर्माण गर्नुपर्छ । सत्ता पक्षले प्रतिपक्षसँग वार्ता गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले पनि हलो अड्काएर गोरु चुटिरहन त पर्दैन, हुँदैन ।
उहाँहरुले पनि त तिन वर्ष रजाई गरेको नेपाली जनताले देखेका छन् । आफैंले नजानेर प्रतिगमनको बाटो हिँडेर न अहिले यस्तो अवस्था सिर्जना भयो । त्यसकारणले अहिले प्रतिपक्षीमा बस्नुप¥यो भनेर सत्ताबाट चाही हट्नुप¥यो भनेर मुलुकलाई अनिर्णयाक बन्दी बनाउने, संसद् चल्नै नदिने, फेरि पनि संसद विघटन गर्नेनै खेतीमा लाग्न प्रतिपाक्षीलाई पनि राम्रो भएको छैन । प्रतिपक्षीको क्रियाकलापलाई पनि नेपाली जनताले राम्रो मानेका छैनन् ।
संसद् अवरुद्ध भइरहँदा खेरी तपाइृहरुले संसद खुलाउन सक्नुभएको छैन र एमालेद्वारा सर्वदलीय बैठक पनि बहिष्कार भयो र प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको बैठकमा एमाले आइरहेको छैन तपाई के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेको प्रतिपक्षीले हिजो सत्तामा हुँदा संसद देख्नै नरुचाउने, संसद् सिध्याउने कुरामा बल गरेको हुनाले अहिले पनि उहाँहरुले जुनसुकै हथकण्डा अपनाए पनि मुलुकलाई चुनावमा लैजाने र फेरि चाही अर्काथरी सत्ता शक्तिको भाग नपुगेकाहरुलाई जिताएर ल्याएर फेरि त्यही रमिता गराउने कुरा हो ।
आवधिक चुनाव त हुनैपर्छ । त्यसकारणले भर्खरै चाही संसद् विघटन गराएर देशलाई चुनावमा धकेल्ने जनु खालको खेल गतिविधि भइराखेको छ, यसलाई अगाडि बढाउन हुन्न ।
संसद् चल्नुपर्छ र प्रतिपक्षीले हिजो सत्तामा बस्दा चिनेका छन् उनीहरुले के–के गरे भनेर अहिले प्रतिपक्षीमा बस्दाखेरी सत्तालाई हड्प्नुप¥यो भन्ने पिरलो हो । त्यो पिरलोले बदलाको भावनाको काम गरिराखेको छ । राजनीतिमा बदलाको भावना लिएर संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर हलो अड्काएर गोरु चुट्न पाइदैन ।
प्रतिपक्षीले पनि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ, माधव कुमार नेपाल लगायत चौध जना सांसद्लाई कारवाही गर्नलाई एमालेको दबाब छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
केपी शर्मा ओलीले जे खोज्नुहुन्छ, त्यही सर्वोच्चले गर्ने भए रजाई गर्न पाउनुहुन्थ्यो, त्यो मिलेन असफल हुनुभयो । जनताले त्यत्रो विश्वास गरेको बेलामा जनताको विश्वासलाई खत्तम पारिसकेपछि अहिले पनि उहि अन्तर्राष्ट्रिय पथ अनुसार प्रधानमन्त्रीले सांसद् भत्काउन पाउँछ भनेर जिद्दि गरेर, ढिपी गरेर संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई चाही उहाँले बल गरेरर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइन्छ ?
तपाईहरु पनि अहिले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ, पाँच दलिय गठबन्धनको सरकारले पनि जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेको छैन, न संसद् चलाउन सकेको छ, न एमसीसी पारित गर्नको लागि वातावरण बनाउन सक्यो किन ?
एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो क्या हो तपाई ? एमसीसी कुनैपनि हालतमा नेपालको हितको लागि उपयुक्त छैन । अमेरिकी साम्राज्यवादको षड्यन्त्र हो भनेर सबैले बुझिसकेका छन् । केपी शर्मा ओलीले बल गर्नुभएको थियो एमसीसी मान्य छैन् । एमसीसी खारेज हुनुपर्छ ।
तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गराउन लाग्नुभएको छ नि त तपाई के भन्नुहुन्छ ?
एमसीसी पास गराउन त केपी शर्मा ओली पनि लाग्नुभएको थियो नि । नेपाली जनताले मान्नुप¥यो नि । नेपाली जनताको हितको लागि हो भने एमसीसीका कर्मचारी आएर नेताका घरघरमा गएर लौरो कि लाउनुप¥यो ? दान दिने मान्छे सहयोग गर्ने मान्छेले ?
थाहा भइहाल्यो नि एमसीसीका मान्छे यहाँ आएर उनीहरुले देखाएको हर्कतले । अब त एमसीसी कस्तो हो भनेर नेपाली जनतालाई घामजुनझै छर्लग भइसकेको छ । एमसीसी किन बोकाउन खोजिरहेको छ, अमेरिकाले ?
एमसीसी पारित हुनुहुँदैन भन्ने तपाईको भनाई हो ?
नेपाली जनताको भनाई हो । चित्रबहादुर केसीको भनाई होइन । विदेशी साम्राज्यवादी एजेण्डा लागु गरेर देशमा रजाई गर्ने होइन । नेपालको देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डता नेपाली राष्ट्रको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गरेर शासन गर्ने हो ।
विदेशीहरुको साम्राज्यवादीहरुको एजेण्डा लागु गर्ने जुन एजेण्टको रुपमा नेपालका शासक प्रसाशकहरु छन्, अब यो नेपाली जनताको लागि मान्य हुँदैन ।
तपाईले नेपाली जनताको लागि मान्य हुँदैन भनेर भनिरहँदा खेरी सुन्ने को ? केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा मिल्दाखेरी एमसीसी पारित हुनसक्छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
एमसीसी पारित भएछ भने केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई त्यसको हिसाब किताब त्यही बेला नेपाली जनताले गर्छन् ।
एमसीसी पारित गर्नको लागि सरकार लागि प¥यो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर ?
त्यतिबेला हेर्नुहोला नि राष्ट्रिय जनमोर्चाले के गर्छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाल राष्ट्रलाई फन्दामा पारेर चीन विरोधी अखडा बनाउनको लागि गरेको दुष्प्रयास नेपाली जनताले देखेका छन् ।
ठाउँठाउँबाट एमसीसीको विरुद्धमा देभरीबाट नेपाली जनताले आवाज उठाएको र अमेरिकनले नबोकाइ नछोड्ने यहाँका आफ्ना एजेण्टहरुलाई भेटिराखेको, कोशिस गरिराखेको नेपाली जनताले झलझली देखेका छन् । त्यसकारणले एमसीसी कुनैपनि हालतमा नेपाली जनतालाई मान्य छैन । यदि कसैले पास गर्ने दुस्साहस गर्छ भने त्यसको पनि राजनीति सकिन्छ ।
नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन भने इनीहरुले नेपाली जनताको भावना अनुसार नीति बनाएर चल्नुपर्छ होइन भने त्यसको हिसाब किताब शासकहरुसँग नेपाली जनताले गर्छन् ।
नेपाली जनतासँग त्यो क्षमता छ । यसभन्दा पहिलेका शासकहरुलाई पनि नेपाली जनताले हिसाब किताब गरेका हुन् । राष्ट्र र जनताको अहितमा काम गर्ने शासकलाई नेपाली जनताले के गर्नुपर्छ त्यो जानेका छन् । भोली भविष्यमा गरेर देखाइदिन्छन् । हाम्रो भर नेपाली जनतामाथि छ ।
२०७८ आश्विन १९, १५: २५: २६
बीरगञ्ज । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तराई मधेशका जिल्लामा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्नको लागि मन्त्रालय मातहतका संघीय कार्यालयका प्रमुख...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अन्तरगत देशका सात वटै प्रदेशमा आज उम्मेदवारी दर्ताको क्रम जारी छ । सबै प्रदेशमा...